नेतृत्वका लागि आत्मनिर्भर हुनु जरुरी | गृहपृष्ठ
Home समाचार नेतृत्वका लागि आत्मनिर्भर हुनु जरुरी
नेतृत्वका लागि आत्मनिर्भर हुनु जरुरी
अध्यक्ष, नसरी तथा पुष्प उत्पादक किसान सङ्घ
सदस्य, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ
‘भकारीको धान होस् या राजनीतिक नीति/सिद्धान्त त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नजाने घरमा भोकमरी र देशमा राजनीतिक सङ्कटको महामारी फैलन्छ,’ सक्रिय राजनीतिक जीवन बिताउँदै आएका सुरेन्द्रमोहन शर्मा भन्छन् । ललितपुरका जिविस पूर्वउपसभापति उनी हाल नेकपा एमालेको भ्रातृ सङ्गठन अखिल नेपाल किसान महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य हुन् । यसै महासङ्घमा आबद्ध विभिन्न पेशागत सङ्गठनमध्ये नसरी तथा पुष्प उत्पादक किसान सङ्घका अध्यक्ष पनि हुन् उनी । उनी राजनीति सँगसँगै फूल रोप्छन्, गोड्छन् र बिक्री गर्छन् । फोस्रा आदर्शका नीति र सिद्धान्त मात्र फलाक्ने नेता मन पर्दैन उनलाई । कम्तीमा जीविकाका लागि भए पनि आर्थिक उपार्जन आफै गर्नेतर्फनलाग्ने नेता/राजनीतिकर्मीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने शर्माको भनाइ छ । त्यसमा पनि आफूलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरूले त झनै उत्पादकत्वमा जोड दिनुपर्ने उनको मान्यता छ ।
ललितपुरको मानीखेल-३ मा २०१० सालमा जन्मेका शर्मा कम्युनिष्ट राजनीति बुझ्नुभन्दा अघि आफू जीविकोपार्जनको मेसोमा लागेको बताउँछन् । राजधानीनिकट भएर पनि बत्तिमुनिको अँध्यारो थियो उनको गाउँ । गाउँको विद्यालयमा ७ कक्षासम्म मात्र पढाइ हुने भएपछि उनी पढ्नैका लागि ललितपुर सदरमुकाम आइपुगेका थिए । पाटन माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसीसम्म पढुन्जेल आफूले एक नसरीमा मालीको काम गरेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मलाई सदरमुकाममा राखेर पढाउन सक्ने घरको अवस्था थिएन । पढाइ खर्च जुटाउन मालीको जागीर खाएँ ।’
पाटन क्याम्पसमा पढ्दा झापा आन्दोलनको प्रभावबाट राजनीत्रि्रति रुचि जागेको शर्मा बताउँछन् । ०३६ सालबाट भूमिगत कम्युनिष्ट राजनीतिमा लागेका उनी यसको २ वर्षपछि नै २ महीनाजति नख्खु जेल परेका थिए । पार्टीीवभाजनपछिको मालेको राष्ट्रिय परिषद् सदस्यसम्म भएका उनी पार्टीीकीकरणपछि ०६१ सालदेखि नेकपा एमालेको उपत्यका समन्वय समितिमा रहे । राजनीतिलाई सृजनशीलता र उत्पादनसँग जोडेर लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने शर्माले २०३० सालबाट फोटोग्राफी पेशा शुरू गरे । ३ दशकदेखि उनले चलाउँदै आएको कोटेश्वरको ‘लालीगुराँस फोटो सर्भिस’ पछिल्लो समय भने आफन्तले हेर्दै आएका छन् । ‘व्यवसाय गरेपछि जीविकोपार्जनका लागि सजिलो हुने र राजनीतिमा भूमिगत रहन पनि सजिलो हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘मैले कहिल्यै पनि पूर्णकालीन कार्यकर्ताका लागि पार्टीले दिने सहयोग लिनु परेन ।’
५ वर्षजिविस उपसभापतिको जिम्मेवारीमा छँदा विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता, कर्मचारी र सरकारी प्रणालीलाई समन्वय गरेर काम गरेको बताउँछन् शर्मा । सामूहिकतामा विश्वास गर्ने उनले ०६२ सालदेखि पुष्प व्यवसायमा हात हालेका हुन् । करीब १ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानीबाट उनले ‘विपुरोज नसरी’ शुरू गरेका हुन् । श्रीमती राधाले नसरीको व्यवस्थापन गर्छिन् । त्यसमा सहयोग र रेखदेख उनको पनि रहन्छ । उनको नसरीमा मौसमी र भित्री तथा बाहिरी सजावटका ग्रीनप्लाण्टहरू उपलब्ध छन् । प्राय: निजी घर, विभिन्न कार्यालय, स्कूल र कलेजहरूबाट नसरीमा ग्राहकहरू आउने राधाले जानकारी दिइन् । नसरीमा रू. १० देखि १ हजार ३ सय रुपैयाँ मूल्यसम्मका बिरुवा छन् । ३ महीनादेखि गोलभेडा, अकबरे खुर्सानी, कुरिलोलगायतको अर्ग्यानिक खेती पनि थालेका छन् उनले । भाडामा लिएको डेढ रोपनी जमीनमा चारओटा टनेल बनाएर उनले तरकारीसँगै ‘कट फ्लावर’ का निम्ति गोदावरी फूलको खेती पनि शुरू गरेका छन् । अर्ग्यानिक खेती गर्नका लागि शर्माले ०५५ सालमा ललितपुरको गिम्दी गाविसमा ३ रोपनी जग्गा किनेका छन् ।
३ सन्तानको रेखदेख, घरव्यवहार र नसरी व्यवस्थापनमा राधाले आड दिएपछि शर्मा अहिले सामूहिक पुष्पखेतीतर्फ लागेका छन् । पुष्प व्यवसायी किसान सङ्घका उपाध्यक्ष मोहन सिलवालसँगको सहकार्यमा उनले यो अभियान थालेको बताए । ०६६ साल मङ्सिरमा ललितपुरका ६ ओटा गाविसलाई कार्यक्षेत्र बनाएर २५ जनाको ‘व्यासायिक फूलखेती समूह’ स्थापना गरे । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना’को सहयोगमा रू. ६१ लाख ३३ हजारबराबरको ‘पुष्पखेती नमूना परियोजना’ उनकै पहलमा शुरू भएको हो । हालै आयोजनाले समूहको परियोजनालाई रू. २७ लाख ५५ हजार दिने सम्झौता गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए । आयोजनाले शुरूमा २० प्रतिशत र बाँकी ३ किस्तामा रकम दिनेछ । परियोजनाका लागि बाँकी रू. ३३ लाख ७८ हजार समूहबाट बेर्होर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको छ । यसका लागि ६ ओटा गाविसमा १५ जनाका दरले ६ ओटा समूह बनाउने तयारी भइरहेको छ । ललितपुरकै थैव र गोदाममा गरी २२ रोपनी क्षेत्रफलमा ग्ल्याडियोलस (तरबारे), गोदावरी र बेमौसमी सयपत्री फूल रोपिएको शर्माले जानकारी दिए । भारतबाट ठूलो मात्रामा फूल आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई यसले कम गर्नेमा शर्मा विश्वस्त छन् । परियोजनाको उद्देश्य कृषकहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा यो व्यवसायमा स्थापित गराउनु रहेको उनले बताए । परियोजनाका लागि समूहका तर्फबाट हालसम्म १२ लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।
आफ्नै पार्टीले अघि सार्दै आएको क्रान्तिकारी भूमिसुधार, कृषि क्रान्ति/औद्योगिकीकरण-लगायतका नारालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कृषिको व्यवसायीकरणमा लाग्नुपर्छ भनेर पनि आफू यस व्यवसायतर्फ लागेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘आत्मनिर्भरसम्म हुन नसक्नेले केको जनताको नेतृत्व गर्नू ?’
पाँचबुँदे सहमतिको राष्ट्रपतिद्वारा स्वागत
जेठ २०, काठमाडौं (अस) । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दलहरूबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन तथा जनचाहनाअनुरूप नयाँ संविधान बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘पाँचबुँदे सहमतिपछि अब शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन्छ र नयाँ संविधान बन्छ भन्ने आशा तथा विश्वास गरौं,’ उनले भने । आरोग्य प्रतिष्ठानद्वारा नेपालमा पहिलोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपणअघि परीक्षण गरिने एचएलए (ह्युमन लियुकोविट एक्टिगन) को परीक्षण प्रयोगशालाको शुक्रवार राजधानीमा उद्घाटन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
एमाओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूले जेठ १४ गते संविधानसभाको समयावधि ३ महीना थप्ने क्रममा पाँचबुँदे सहमति गरेका थिए । ‘राजनीतिक सङ्क्रमणकालको छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गरी अघि बढ्न सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत आमनेपालीसँग म आह्वान गर्छु राष्ट्रपति डा. यादवले भने ।
विदेश जाँदै गरेका नेपालविरुद्ध प्रदर्शन
जेठ २०, काठमाडौं (अस) । विदेश जान विमानस्थल पुगेका एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध प्रदर्शन भएको छ । संविधान बनाउने कामलाई महत्त्व नदिई बङ्गलादेश जान लागेका उनीविरुद्ध फेसबूक सञ्जालका सदस्यहरूद्वारा प्रदर्शन भएको हो । विरोधकर्ताले नेपाललाई भ्रमण रद्द गर्न खबरदारी गरेका छन् ।
एशिया प्यासिफिक शान्ति सम्मेलनमा भाग लिन नेपालसँगै बङ्गलादेश जान लागेको टोलीमा नेपाली काङ्ग्रेसकी सुजाता कोइराला, एमाओवादीकी हिसिला यमी पनि छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबूकका अगुवाहरूले नेताहरूलाई अहिलेको परिस्थितिमा विदेश नजान दबाब दिँदै आएका छन् । नेताहरूको विदेश भ्रमण रद्द गर्न उनीहरूले मौन जुलुस निकालेका थिए । दलका शीर्ष तथा महत्त्वपूर्ण नेताहरूको विदेश भ्रमणको चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि नेपालसहितका नेताहरू ३ बजेको विमानबाट बङ्गलादेश गएका छन् । पूर्वप्रम नेपाल संवैधानिक समिति तथा संविधानमा देखिएका विवाद समाधान गर्न गठित उपसमितिका सदस्य हुन् ।
‘३ महीना थपिनु सङ्कट टर्नु होइन’
जेठ २०, बनेपा (अस) । सभामुख सुवास नेम्वाङले संविधानसभाको म्याद ३ महीना थपिनुलाई ‘सङ्कट टरेको नभई सरेको’ बताएका छन् । नेपाल बार एशोसिएशन केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ३६औं बैठकको शुक्रवार काभ्रेको बनेपामा उद्घाटन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै उनले पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नेतर्फसबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताए । ‘दलहरूले गरेको सहमति कार्यान्वय हुनैपर्छ, त्यसलाई कसैले पनि नकार्नु हुन्न,’ सभामुख नेम्वाङले भने, ‘सहमतिको अक्षरश: पालना हुनैपर्छ ।’ पाँचबुँदेलाई लिएर विवाद गरिरहनु उचित नहुने उनको भनाइ थियो । ‘सहमतिविरुद्ध दलका नेताहरूले बोल्नु बिलकुल ठीक होइन, यो डुङ्गा डुब्यो भने हामी सबै नै डुब्छौं,’ नेम्वाङले भने । उनले शुक्रवारदेखि चल्ने व्यवस्थापिका-संसद्बाट पाँचबुँदे अनुमोदन हुने पनि बताए ।
सोही कार्यक्रमा बोल्दै प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले भावी संविधानमा न्यायप्रणालीसम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई आधार बनाइनुपर्ने बताए । ‘विवाद समाधानको माध्यमद्वारा सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्दै जनचाहनालाई पूरा गर्ने जिम्मेवारी अब न्यायपालिकाको काँधमा आएको छ,’ उनले भने ।
एमाओवादी बैठक स्थगित
जेठ २०, काठमाडौं (अस) । एनेकपा माओवादीको स्थायी समितिको शुक्रवार बसेको बैठक विनानिष्कर्ष टुङ्गिएको छ । बैठक शनिवारसम्मका लागि स्थगित भएको पार्टी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले जानकारी दिए । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वर, पेरिसडाँडामा बसेको बैठकमा विभिन्न विषयमा छलफल भए पनि कुनै औपचारिक निर्णय नगरिएको उनले बताए । ‘बैठकमा जेठ १४ गते तीन दलबीच भएको पाँचबुँदे सहमति, पार्टीहरुको आन्तरिक सङ्गठनात्मक पद्धति, शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन प्रक्रियालगायतका विषयमा छलफल भयो,’ उनले भने ।